Ergeyga dalka Qatar oo kulan la leh Qoorqoor, Guudlaawe iyo Laftagareen | KEYDMEDIA ONLINE
Ergeyga dalka Qatar oo kulan la leh Qoorqoor, Guudlaawe iyo Laftagareen
Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada Galmudug, HirShabeelle iyo Koofur galbeed, oo maanta kulan la qaadanaya waftiga ka socda dalka Qatar ee ku sugan Caasimadda Soomaaliya Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ergeyga Gaarka ah Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dowlada Qatar u qaabilsan la dagaalanka Argagixisada iyo dhex dhexaadinta xalinta khillaafaadka, Dr. Mutlaq Bin Majed Al-Qahtani, ayaaa maanta kulan la qaadan doona Madaxweynayaasha Maamullada Galmudug, HirShabeelle iyo Koofur galbeed.
Axmed Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe, ayaa in muddo ah ku sugan Caasimadda, waxaana saacadaha so socda ku soo wajahan Cabdicasiis laftagareen, si uu uga qeyb galo kulankaan.
Shirka oo looga hadli doono xaaladaha sababay is mari waaga taagan ee doorashooyinka iyo sida looga gudbi karo ayaa la qorsheeyay inuu dhaco galinka danbe e maanta, ka hor inta uusan Al-Qahtani, la kulmin Farmaajo.
Dr. Mutlaq Bin Majed Al-Qahtani, ayaa qorsheynaya inuu la kulmo dhamaan dhinacyada lagama maarmaanka u ah, xal u helidda arrimaha Siyaasadda ee cakiran, kuwaas oo sababay, muranka doorashooyinka ee gacan ka hadalka isku badelay.
Dr. Mutlaq, oo kulamo joogto ah ka waday magaalada Muqdisho, tan iyo markuu yimid ayaa hore ula soo kulmay, Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Guddoomiyayaasha labada aqal ee Baarlamaanka, Golaha Midowga Musharixiinta, Taliyaha NISA iyo Shaqsiyaad kale oo muhiim ah.
Dowladda Qatar ayaa lagu eedeeyaa in ay afartii sano ee la soo dhaafay si sharci darro ah u naas-nuujineysay maamulkii Farmaajo, iyadoo laga faa’iideysanayo xiriirka ka dhexeeya kooxada muqaabaraadka dalkaas iyo Taliyaha NISA Fahad Yaasiin.